Uyifaka njani iXfce kwi-Ubuntu nakwiziphumo? | Ubunlog
Uyifaka njani iXfce kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Ubumnyama | | Iidesika
Enye ye iimpawu ezintle kunye neenzuzo endiyithandayo yeLinux yinto enokwenzeka yokuba ukwazi ukuyenza ngokwezifiso ngokweemfuno zethu kwaye nangcono ukuze sikwazi ukuyinika imbonakalo eyahlukileyo enkosi kwiindawo ezahlukeneyo zedesktop ezikhoyo kuyo.
Kwaye oko Siyayibona isetyenziswa ku-Ubuntu, kuba asinayo inguqulelo enye kuphela yoku, kodwa nayo Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeencasa zoku, IGnome, i-LXDE, i-XFCE, i-KDE phakathi kwabanye, kodwa asixhomekekanga kubo.
Nokuba sinokukhetha imeko-bume ethile, sinokufaka enye okanye ezininzi ukuze sizivavanye okanye sitshintshe inkangeleko esiqhele ukubona.
Okanye kwelinye icala Sinokukhetha ukususa ngokupheleleyo idesktop enye kwaye sigcine enye, konke oko kuxhomekeke kwiimfuno zomntu ngamnye.
Amaxesha amaninzi, iimeko zedesktop aziphikisani, nangona kunqabile apho siza kubona into engekhoyo, umzekelo umphathi wenethiwekhi ulahlekile okanye into efanayo, ungasusa idesktop entsha engqubanayo okanye ufake kwakhona esele ikhona .
Kungenxa yoko le nto kolu ngeno lutsha siza kuthatha ithuba lokufaka imeko ye-desktop yeXFCE kwi-Ubuntu esiyithandayo kwaye siyokwazi umahluko phakathi kokufaka imeko yeXFCE kunye nephakheji yedesktop yeXubuntu.
1 Uyifaka njani iXFCE?
2 Faka i-Xubuntu-Desktop kwi-Ubuntu nakwiziphumo.
3 Uyikhupha njani iXFCE okanye iXubuntu-Desktop?
Uyifaka njani iXFCE?
Sineendlela ezimbini zokuba nemeko-bume ye-desktop yeXFCE kwinkqubo yethu, nokuba ukufaka ngokuthe ngqo iphakheji ye-xfce4 Apho siza kuba nedesktop yeXfce kuphela kunye neephakeji ezithile ezisisiseko ezifakwe kwiXfce desktop.
Ngale nto siza kuba neephakeji ezisisiseko kuphela, kodwa ubumbeko lokusebenzisa yonke into i-XFCE esinika yona kuya kufuneka yenziwe sithi.
Ngoku ukuba sifaka iphakheji yeXubuntuIya kufaka i-Xfce desktop kunye nazo zonke iipakeji ze-xfce4 kunye neephakeji ezongezelelweyo ezibonelelwa kukusasazwa kweXubuntu.
Xa usenza olu fakelo, ukumiliselwa kwendalo kuya kuguqulwa ukuze kusetyenziswe zonke iiphakheji zeXFCE ngokwendalo. Iphakheji yokufaka lukhetho lomntu wonke ngokokuthanda kunye neemfuno zabo.
ukuba faka i-XFCE kwinkqubo, kufuneka sivule i-terminal kwaye senze lo mthetho ulandelayo:
Ngaloo nto Zonke iipakeji eziyimfuneko ziya kufakwa, i-desktop ayikhaphukhaphu ke ixesha lofakelo liya kuxhomekeka kunxibelelwano lwakho lwe-intanethi.
Kanye ifake imeko-bume eyimfuneko ukuqala kwakhona inkqubo yakhoXa uqala kwakhona kwiscreen sokungena kukhetho lokukhetha imeko-bume yedesktop, siya kukhetha i-XFCE kwaye ngaloo nto siza kungena ngesiqhelo, kodwa ngemeko yedesktop yeXFCE.
Ekubalekeni kokuqala, iya kukucela ukuba uqwalasele useto, banokukhetha ubumbeko olungagqibekanga.
Faka i-Xubuntu-Desktop kwi-Ubuntu nakwiziphumo.
ukuba fakela iphakheji yokumisela iXubuntu kwikhompyuter yethuKuya kufuneka siphumeze lo myalelo ulandelayo kwisiphelo sendlela:
Iphakheji ye-xubuntu-desktop Inzima kancinci kunangaphambili, oku kungenxa yokuba ayikhupheli imeko-bume kuphela, kodwa ikwanayo ezinye izinto ezingaphezulu zongezwa njengemifanekiso kunye neefayile zoqwalaselo lwenkqubo.
Ngexesha lenkqubo yofakelo, iya kusicela ukuba sikhethe nokuba yeyiphi umphathi wokungena ngemvume esifuna ukuba nguye esinaye ngokusilelayo.
Ekupheleni kwenkqubo kufuneka siqale kabusha ikhompyuter kwaye singene kunye ne-Xubuntu-Session.
Uyikhupha njani iXFCE okanye iXubuntu-Desktop?
Yiba sisizathu sokuba ufuna ukukhipha okusingqongileyo apha ndikushiya nemiyalelo yokususa, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba kuya kufuneka ube nenye indawo kuba awuzukuba nayo enye ukuba unayo enye yezi.
Ukuba bayifakile iphakheji ye-xfce4, Sebenzisa le miyalelo ilandelayo ukususa iXfce:
Ukuba ufake ipakethe ye-xubuntu-desktop ukufaka i-Xfce, sebenzisa le miyalelo ilandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » Uyifaka njani iXfce kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Ndihamba nich sitsho
Enkosi ngolwazi oluluncedo kakhulu.
Phendula uVoy Nich
U-Enrique Isicwangciso seMarti sitsho
Ibhlog enkulu. Yonke into icocekile kwaye icacile. Enkosi
Phendula u-Enrique Planells Marti
xubuntu-desktop: Kuxhomekeka: xorg kodwa ayizukufakwa
Kuxhomekeka: xubuntu-core kodwa ayizukufakwa
E: Ayikwazi ukulungisa iingxaki, ubambe iipakethe ezaphukileyo.
Yandisa indawo yekhompyuter yakho ku-Ubuntu 18.04 ngala maqhinga mncinci
Uyicwangcisa njani iRhafu?